Duqeymo ba’an ayaa la sheegay in ay ka dhaceen Jiidda Ghaza oo ah magaalada kaliya ee aan ku jirin gacanta Yahuudda marka loo eego dhulka Filasdiin oo inta badan gumeysi kujira.
Goob jogayaal ayaa sheegay in duqeymaha oo bilaawday xalay saqdi dhexe ay soo gaareen maanta barqadii, ugu yaraan sedax qof ayaa la sheegay in ay ku shahiideen duqeymaha waxaa kale oo ay geysteen burbur lixaad leh.
Guutada Cizudiin Qassaam oo ah garabka melleteri ee Xarakada Xamaas ayaa war ay sii saartay ku sheegtay in sedax dagaalyahan ka shahiideen iyadoona ku goodisay ay ka aargudan doonto daan daansiga cusub ee ka yimid Yahuudda Sahyuuniyadda.
Mas’uuliyiin katirsan Ururka Xamaas ayaa uga digay Yahuudda sii wadidda duqeymahan oo jawaab celinta ka imaanaysa muqaawamada ay isku bedeli doonto dagaal culus.
Dhinaca kale laba qof ayaa ku shahiiday rasaas ay ciidamada Booliska Yahuuddu ku fureen dad iskuso baxyo ka dhigayay magaalada Khaan Yuunis, ciidamada Yahuudda ayaa adeegsanaya rasaas nool nool.
Malaayiin qof Filasdiiniyiin ah ayaa kujira shaqa joojin waxayna qeyb qaadanayaan Intifaadada cusub ee lagu difaacayo Masjidka Barakeysan ee Al-aqsaa.
Xoogaga islaamiga Naasir Salaaxuddiin ayaa habeenkii Jimcaha weeraro loo adeegsaday madaafiic ku garaacay magaalooyin ay Yahuuddu heysato waxayna sheegeen in weerarkaas Jawaab celin u ahaa go’aankii Trump uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda waxa loogu yeero Israa’iil.